Chii chinonzi CMS: hunhu, mhando uye izvo zviri nani kune eCommerce | ECommerce nhau
Chokwadi pane imwe nguva wakambonzwa kana kutaura nezve izwi rekuti CMS, uye zvakadaro hauna kuziva zvechokwadi zvazvaireva. Paunoita sarudzo yekumisikidza eCommerce, izwi iri rinowanikwa mune dzakawanda hurukuro. Asi chii chinonzi CMS?
Kana iwe uchine kusava nechokwadi pamusoro pechinomiririra, iwe hauzive kuti ndezvei, kana hunhu hwayo kana zvakanakira zvichienzaniswa nemamwe matekinoroji, inguva yekuti iwe utange kunzwisisa zvese. Uye, nekuda kwechikonzero ichocho, zvinotevera isu ticha taura nezvazvo chii chinonzi CMS uye zvese zvine hukama neizvi kuti iwe uzive.
1 Chii chinonzi CMS
2 Mashandiro anoita CMS
3 Hunhu hupi hwavanadzo
4 Ndeipi CMS iri nani kune eCommerce?
4.2 WordPress CMS neWoocommerce
Kutanga, CMS inomirira "Zvemukati Management Sisitimu", iyo muchiSpanish inodudzirwa se «zvemukati manejimendi manejimendi». Uye ndeyei? Zvakanaka, izvi, sezvaunogona kufungidzira, chishandiso che gadzira webhusaiti, iripe uye gadzirisa zvese zviri mukati maro. Mune mamwe mazwi, isu tiri kutaura nezve system inoenderana nekuvaka peji rewebhu raunokwanisa kubata, dzimwe nguva pasina kuziva chirongwa.
Vanhu vazhinji vanoshandisa CMS kugadzira mawebhusaiti avo, uko isingangoshandiswa chete kune "zvakajairika" peji rewebhu, asiwo blog, eCommerce, nezvimwe. Kazhinji, kune chero peji rinoda kugara uchigadziriswa, zvishandiso izvi ndizvo zvinobudirira. Ndokusaka iwe uchigona kuwana dzakasiyana mhando dzeCMS, zvinoenderana nepeji: pane emablog, emapeji emakambani, eCommerces, ezve multimedia zvemukati ... Chinonyanya kukosha ndechekuti:
Mashandiro anoita CMS
Iye zvino zvaunoziva izvo CMS, inguva yekuti iwe unzwisise mashandiro avo. Uye chinhu chakanakisa ndechekukupa iwe muenzaniso. Fungidzira kuti iwe unofanirwa kugadzira peji rewebhu remabhuku. Sezvo iwe uchivhura bhuku idzva pamusika, iwe unofanirwa kugadzira yako peji rewebhu uye izvo zvinotora nguva nekuti iwe unofanirwa kugadzira iyo HTML chimiro, simbisa kuti inoshanda, isanganise pamwe neiyo peji rese, isa zvinokodzera zvinongedzo mune chikuru iyo ... Huya, zvinogona kutora awa Senge shoma. Asi zvakadiniko neCMS? Zvakanaka, ingave iri nyaya yemaminitsi mashanu nekuti inokusevha ese iwo maitiro ekugadzira iyo peji kubva pakutanga, nekuti iye atove mutariri wekuronga icho chimiro. Iwe unongofanirwa kuudza izvo zvemukati izvo peji rinofanirwa kuve nazvo, iyo url nemifananidzo uye ndizvozvo
Semushandisi, Iwe haufanire kunetseka nezve technical chikamu, nekuti iyo CMS inotarisira izvo; iyo inokupa iwe yakawanda nguva yekutarisa pane dhatabhesi, zvirimo uye nezano rekuita kuti web rionekwe.
Hunhu hupi hwavanadzo
Kubva pane zvese zvataurwa pamusoro, CMS inogona kuzivikanwa ne:
Kukwanisa kugadzira mapeji ewebhu uye zvinyorwa mukati mawo.
Rongedza zvinyorwa uye makodhi ewebhusaiti kuitisa.
Maonero ane mwero.
Isa mapulagi anowedzera mashandiro enzvimbo yacho (semuenzaniso, mune iyo WordPress, neWoocommerce, unogona nyore kuvaka eCommerce).
Kusununguka kwekudzidza kuishandisa. Pakutanga zvinomisikidza zvishoma, asi wozoona kuti zvine hungwaru, uye zviri nyore kushandisa, izvo zvinobvumidza chero munhu kuzvibata.
Kunoshandiswa zviwanikwa zvishoma. Kwete chete nekuti zvinokubhadharira mari zvishoma uye zvinochengetedza nguva, asi zvakare nekuti iyo inomiririra server inoshandisa zviwanikwa zvishoma uye izvo zvichaita kuti memory yako, CPU uye hard disk zvisave zvakanaka, kuratidza webhusaiti yako nekukurumidza.
Ndeipi CMS iri nani kune eCommerce?
Uye tasvika pamubvunzo wekuti, pasina mubvunzo, unogona kunge uchizvibvunza izvozvi. Ndeipi CMS yakanakisa yeCommerce? Ichokwadi ndechekuti mhinduro yacho yakaoma.
Kana isu tikatarisa zvemukati manejimendi masisitimu akatarisana nezvitoro zvepamhepo, isu tinofanirwa kukuudza kuti iwe unenge uri pakati pePrestashop, WordPress + WooCommerce neMagento. Aya matatu ndiwo anotonga pamusika weCommerce, uye pavari vese, pamwe Prestashop ndiyo iri kubudirira zvakanyanya. Asi WordPress iri pazvitsitsinho zvayo zvakanyanya. Uye, nekungoisa plugin, iwe unotova nechitoro chepamhepo nezvose zvinhu zvemukati manejimendi system Uye zviri nyore kwazvo kushanda nayo.
Saka ndechipi chakanakisa? Tinozviongorora.
Prestashop ndeimwe yeCMS iyo yakanangana chete nekutengesa zvemagetsi, ndokuti, inoenderana nekugadzira mawebhusaiti ezvitoro zvepamhepo, eCommerces, nezvimwe.
Kuti uite izvi, inosimbisa chimiro chakakosha chinowanzoonekwa kune vese, asi inokupa maturusi ekuisa plugins kana ma module, pamwe nematemplate, ayo anogadzirisa saiti zvichibva pane zvaunoda kutengesa uye maitiro ekupa ruzivo rwekutenga kune vatengi.
Nehunyanzvi zvinonetsa kushandisa, kunyanya pakutanga. Zvinoda ruzivo rweCMS, chimwe chinhu chisingazivikanwe nevazhinji, saka mikana yakawanda yekuibata 100% yakarasika. Asi hazvina kuoma kudzidza, zvinongotora nguva kuti uzviite.
WordPress CMS neWoocommerce
WordPress, kuti iome, nhasi ndiyo inonyanyo shandiswa zvemaneja meseji nekuti zviri nyore kwazvo kushandisa uye, nekuda kwema plugins uye zviuru zvematemplate (emahara uye akabhadharwa) aripo, zviri nyore kwazvo kugadzirisa uye kugadzirisa zvinoenderana nezvinodiwa uyo ane.
Pamberi pacho, yaive yakanangwa pamapeji ewebhu nemablog, asi nechitarisiko cheWoocommerce plugin, pakanga paine shanduko. Uye iwe unogona kushandisa WordPress sekunge yaive zvakare chitoro chepamhepo. Izvi zvaireva izvozvo unogona kuenderera mberi nekushandisa saiti isinganetsi-kugadzirisa uye, nekuwedzera mashandiro ayo, uchiri kubatsirwa nekureruka ikoko.
Chinhu chega chepasi chatinogona kuisa ndechekuti Woocommerce plugin inowanzo kunetsa kuisa, kunyanya maererano nekuisa zvigadzirwa, uye kutumira data, mari, nezvimwe. Izvo zvinogona kunge zvakashata. Asi pane zvakawanda zvekudzidzisa paInternet zvinogona kukubatsira kugadzirisa dambudziko, uye kuve intuitive, inodzidziswa nekukurumidza kuibata, chimwe chinhu icho, dzimwe nguva, muPrestaShop chinotora nguva yakawanda kuti chiite.
Zvino zvaunoziva kuti chii chinonzi CMS, uye kuti unoziva zvavanoreva nezwi iro, kana iwe uri kufunga nezvekugadzira peji rewebhu, rorudzi rupi zvaro, iwe unozogona kuziva kuti ndeipi yakanakira iwe zvichibva pane yako ruzivo rwehunyanzvi, kuronga, kushandisa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Chii chinonzi CMS